चैत २४, अर्थात् जनआन्दोलन दिवसको महत्व - Janabato
चैत २४, अर्थात् जनआन्दोलन दिवसको महत्व
२०७७ चैत २४ गते मङ्गलबार ०८:०६ मा प्रकाशित
४ दिन, १६ घन्टा, १५ मिनेट अगाडि
७५ जनाले हेरिएको
चैत २४, बुटवल । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चैत २४ अर्थात् जनआन्दोलन दिवसलाई हरेक बर्ष मनाउदै आएको छ । राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको कठीन अवस्थामा समेत गाउँ गाउँमा पुगेर नेकपाले विगतमा जनआन्दोलन दिवस मनाउदै आएको छ । यसपटक पनि विभिन्न स्थानहरुमा जनआन्दोलन आन्दोलन दिवस मनाउने नेकपाले बताएको छ । जनआन्दोलन दिवसको सन्दर्भ पारेर नेकपा र सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरुले विभिन्न भेला, सम्मेलन, प्रशिक्षणहरु गर्ने बताइएको छ । नेकपा लुम्बिनी ब्युरोले ब्युरो अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरुमा केन्द्रीकृत अभियान चलाइरहेको बेला गाउँबस्तीमा पुगेर जनआन्दोलनलाई स्मरण गर्ने बताएको छ ।
२०४६ सालको चैत २४ लाई जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिनमा रुपमा लिइन्छ । त्योबेला राजतन्त्रको विरोध गर्दै काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको महेन्द्रको सालिक ढाल्न खोज्दा ४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । चैत २४ गतेका दिन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सबैतिरबाट जति जुलुसहरू टुडिखेलतिर जम्मा हुदै थिए, त्यतिबेलाको नारा थियो 'राजतन्त्र मुर्दावाद ! गणतन्त्र जिन्दावाद !' तर, चैत २६ गतेको दिन पञ्चायतको मात्रै अन्त्य गरीकन संवैधानिक राजतन्त्रका निम्ति सम्झौता भयो । प्रहरीले लाठी, बूट, गोली र अश्रुग्यासलगायतका सबै औजार प्रयोग गरेर जनतालाई दमन ग-यो ।
फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर आन्दोलन सुरु भएको थियो। काङ्ग्रेस नेता गणेशमान सिंहले २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। नेकपा (माले), नेकपा (मार्क्सवादी) नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका पार्टीले संयुक्त वाममोर्चाको निर्माण गरेका थिए भने नेकपा ९मसाल० लगायतका पार्टीहरूले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समिति बनाएर आन्दोलनमा भाग लिएका थिए।
दलित मुक्ति मोर्चा अछामको दोस्रो जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न
अखिल (क्रान्तिकारी) गुल्मीद्धारा संगठन विस्तार
जनतामाथिको दमनका विरुद्ध प्रतिकार गरौं : नेकपा